An’aliny Maro Nidina An’arabe Nanohitra Ny “Ady Kivalavala” Mahafatin’ny Filoha Duterte · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Oktobra 2017 13:24 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Español, русский, English
Diabe ho any Luneta, notarihan'ireo vitsy an'isa ao amin'ny firenena tamin'ny 21 Septambra lasa teo. Loharano: Manila Today. Nahazoana alàlana.
Ny 21 Septambra 2017, an'aliny maro ireo tonga nanatevina laharana ny hetsipanoherana tao Manila, Filipina, mba hanameloka ireo fanitsakitsahana zon'olombelona ataon'ny governemantan'ny Filoha Rodrigo Duterte, izay nandray an-tànana ny fitondràna tamin'ny Jona 2016.
Nitovy tamin'ny andro nametrahan'ilay mpitondra jadona Ferdinand Marcos tamin'ny 1972 ny lalàna miaramila tao amin'ny firenena no nanaovana ilay hetsipanoherana. Hatramin'ny 1981 i Filipina no teo ambany lalàna miaramila. Nandritra io vanimpotoana io, ny governemantan'i Marcos dia nampangaina ho nanao fanimbazimbàna zon'olombelona faran'izay henjana. Hetsika am-pilaminana iray fantatra amin'ny hoe Fahefan'ny Vahoaka no nanongana an'i Marcos tamin'ny farany. Im-betsaka i Duterte no nilaza ny fitiavany an'i Marcos.
Hatezerana iraisana no nasehon'ireo nandray anjara tamin'io hetsipanoherana io manoloana ilay ady kivalavalan'ny fitantanan'i Duterte, antsoiny hoe : “ady amin'ny zavamahadomelina” izay efa nahafatesana olona maherin'ny 13.000, ny “ady faratampony” anoherana ny kaominista mpihoko izay nanilika ireo tantsaha sy vahoaka indizena hiala ny taniny, ary ny “ady amin'ny horohoro” any Marawi izay nametraka ny tapany atsimo manontolo amin'i Mindanao ho ambany lalàna miaramila.
Fanampin'ny isa tsy mitsahatra mitombon'ny fahafatesana aterak'ilay ady amin'ny zava-mahadomelina, ny Karapatan, vondrona miady ho an'ny zon'olombelona koa dia nandrakitra famonoana 88 natosiky ny resaka politika nihatra tamin'ny ankamaroan'ireo mpitarika tambanivohitra sy mpikatroka mafàna fo, nifanindran-dàlana tamin'ireo tranganà fisamborana tsy ara-dalàna, ireo fanesorana an-terisetra, ny daroka baomba avy eny amin'ny habakabaka, ary ny fitifirana tsy ahoan-tsy ahoana tao anatin'io adin'i Duterte amin'ny mpihoko io.
Teo ambany fitarihan'ny Firaisamonina sivily “Movement Against Tyranny” (MAT) – Hetsika Manohitra ny Tsy Refesi-mandidy -, nandray anjara avokoa na mpiasa, na tantsaha na fikambanam-bahoaka, mpikambana avy amin'ireo vitsy an'isa eo amin'ny firenena, ny fikambanam-pinoana, mpanakanto, mpianatra, ary matianina avy amin'ny sehatra samihafa mba hahatontosa ilay famoriambahoaka tao Luneta.
Nokiahan'ireo mpanao hetsipanoherana ny ahiahin-dry zareo manoloana ny hitan-dry zareo ho ezaka ataon'i Duterte hametraka fitondràna jadona ao amin'ny fireneny. Nanipika izay zavatra itovian'i Marcos amin'i Durtete ilay fikambanana mpiaro zo Karapatan:
Vao mainka miha-mivandravandra ny fitoviana misy eo amin'ny fitondran'i Marcos sy Duterte, satria ity farany tsy hoe fotsiny manampy amin'ny famerenana amin'ny toerany ara-politika ireo mpanaradia an'i Marcos, fa koa mampiasa ireo tetikady fasista ary ireo politika manindry vahoaka tsy misy hafa amin'ny fony fitondrana jadon'i Marcos, isan'izany ny fampitahorana mba hametrahana lalàna miaramila manerana ny firenena. Tetikady nalaina mivantana avy amin'ny fitantaràna tany anaty boky tahirin'ny famoretana nataon'i Marcos no nampiasain'i Duterte sy ny sampandraharaham-piarovany, amin'ny famerenana sy fanamarinana ireo fanimbazimbana zon'olombelona ataony, miaraka amin'ny fiverimberenana sy fihamafisany tsy mitsahatra mitombo.
Ireo vahoaka mpanao hetsipanoherana tao amin'ny Kianja Luneta. Sary: Manila Today. Nahazoana alàlana
Ezaka hisomparana sy hanendrikendrehana ireo mpanao hetsipanoherana
Feno sakantsakana ny làlana nizorana ho amin'ny fanatanterahana ilay famoriambahoaka. Tany am-boalohany ireo manampahefana dia nanambara ny fisian'ny fandavahana hampihovitrovitra ny firenena amin'ny 21 Septambra. Mino ny sasany fa ezaka ho fanakanana ny olona io, indrindra fa ireo mpiasa sy mpianatra, mba tsy ho avy hanotrona ilay famoriambahoaka. Avy eo, nohasarotina mihitsy ny resaka fiarovana ny faritra tao amin'ny Kianja Luneta ho an'ireo mpikarakara ny fihetsiketsehana. natsahatra avokoa ireo kilasy sy asa tany amin'ny sekolim-bahoaka ary biraom-panjakana, raha ny fahitàna azy dia toy ny natao izay hahakivy ireo mpanatrika ilay hetsipanoherana. Ao Filipina, afaka manatrika famoriambahoaka ireo mpianatra sy ny mpampianatra azy ireo raha toa misy kilasy rehefa vitan'izy ireo ny mandresy lahatra ny manampahefana ao an-tsekoly mba hanatevina laharana ny hetsika politika iray, hiaraka ho toy ny tarika iray. Ary koa, matetika ireo politisiana no mampitsahatra fampianarana mba hanakanana ny mpianatra sy ny sekoly tsy handray anjara aminà hetsika politika.
Nandrahona hametraka lalàna miaramila ny Filoha Duterte raha toa mivadika ho herisetra ilay hetsipanoherana. Mandritra izany, ny lehiben'ny polisim-pirenena nampitandrina fa tafatsofoky ny mpihoko mitam-piadiana ny sambo enina mitondra mpanao hetsipanoherana avy any Visayas sy Mindanao ho avy hanatrika ilay fihetsiketsehana. Taty aoriana izy dia nilaza fa diso ny vaovao voarainy.
Andro vitsy taorian'ilay hetsipanoherana, nambaran'ny Filoha Duterte ho “Androm-Pirenena ho Fanoherana” ny 21 Septambra ary dia nanetsika mpiasa vitsivitsy sy mpanohana avy amin'ny governemanta izy hanao fihetsiketsehana fombàna an'i Duterte, tamin'ny fampiasàna volam-bahoaka hanofàna fiarabe, hizaràna sakafo ho an'ireo mpandray anjara ary hanakaramàna mpanakanto manaitaitra mba hampiala voly ireo vahoaka.
‘Ny goban'i Rody’ nodorana teo amin'ny tetezan'i Mendiola, eo ivelan'ny vavahadin'ny lapam-panjakàna indrindra. Sary: Manila Today. Nahazoana alàlana
Izay nisongadina tamin'ilay famoriambahoaka
“Goban'i Rody” iray mirefy 2,5 m eo ho eo, marika famantarana nalaina tàhaka avy amin'ilay goba rubix saingy misy ny sarin'ny tarehin'ny filoha Duterte miafanila amin'ny an'ilay mpitondra jadfona tao Filipina Ferdinand Marcos, Adolf Hitler mpitarika ny Nazi, ary alika kely iray entina ilazàna ny governemanta saribakolin'ireo hery vahiny toa an'i Etazonia. Ao Filipina, ny fampiasàna ny fomba fiteny hoe “alika kely” (tuta amin'ny fiteny Filipino) amin'ny sehatry ny politika dia manondro fanarahana an-jambany ny tenin'ny mpifehy.
Ankoatra ireo endrika famantarana nahitàna asa famoronana, ireo sorabaventy goavana; ireo takelaka maroloko, ary ireo lahateny mivaivay, nanasongadina fampisehoana ara-kolontsaina ihany koa ilay hetsipanoherana. Nahitàna, tanatin'ny maro, dika Filipiana ho an'ilay “Do You Hear The People Sing – Renao Mihira ve ny Vahoaka” nalaina tao amin'ilay hatsikana mozikaly “Les Miserables”.
Na natsahatra aza ny fampianarana tany amin'ireo sekolim-panjakana sy tsy miankina marobe, an'aliny maro ny mpianatra tonga nanatevina laharana ilay hetsipanoherana tao Luneta. Raha ny marina, niparitaka be ny bitsika iray mampiseho mpianatra iray nanatevina laharana ilay famoriambahoaka no sady miana-desona:
ANATIN'NY TOLONA IREO MANAMPAHAIZAN'NY VAHOAKA
(SADY MIANATRA LESONA BIO 12)
Hetsipanoherana maro hitranga ato anatin'ny herinandro vitsy hoavy
Taorian'ny fanehoana matanjaka tamin'ilay hetsipanoherana tamin'ny 21 Septambra, niverenan'ny Filoha Duterte ireo fandrahonany tany aloha ary novàny indray mandeha indray ny fipetrany tamin'ny fanitàrana “sampan'oliva iray” sy fandrosoana “fifampiresahana hanatsaràna zavatra” tamin'ireo mpanao hetsipanoherana.
Ireo mpitarika ny mpihetsiketsika anefa nilaza fa faran'izay “feno fihatsaràna ivelan-tsihy” ny tolotr'i Duterte ankoatry ny ady mitohy ataony amin'ny zavamahadomelina, ny ady amin'ny mpihoko, ary ny lalàna miaramila ao Mindanao. Io hoy ry zareo dia tsy mampiseho afa-tsy ny tahotry ny Filoha Duterte ny ho fisianà hetsi-bahoaka tsy manam-paharoa sy goavana hanoherana ny fitondràna lian-dràny.
Nanome toky ireo vondrona sivily isankarazany fa hanao hetsika goavana kokoa hanoherana ny fanamafisan'ny fitondran'i Duterte ny fanimbazimbàna zon'olombelona ataony, ary ny tsy refesi-mandidy tsy mitsahatra ny mitombo.